चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दुर्गा प्रसाईको ज्यान मार्ने धम्की ! | सुप्रीम खबर
चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई दुर्गा प्रसाईको ज्यान मार्ने धम्की !
काठमाडौं । निक्कै उदण्ड भनेर चिनिने बीएमसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको डा. गोबिन्द केसीले बताएका छन् । काठमाडौंमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री ओली समेत ज्यान मार्ने धम्की दिने मतियार बनेको आरोप लगाए । झापाको बीएमसी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियम उलंघन गरेर विश्वविद्यालयलाई आदेश दिएको बताए । चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन दिन नहुने भनी ठहर गरेको अस्पताललाई सम्बन्धन दिन्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेर प्रधानमन्त्री ओलीले अपराध गरेको आरोप डाक्टर केसीले लगाए ।
अघिल्लो लेखमाफास्ट ट्रयाकको ५२ अर्बको ठेक्कामा आर्थिक हिनामिनाको आशंकामा लेखा समितिले थाल्यो छानबिन
अर्को लेखमाफेरी बढ्यो डिजेल र प्रेट्रोलको मुल्य